मन पराउने, अफर दिने धेरै छन् : तरकारीवाली - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:१८
तरकारी बोकेर बजार जाँदै गर्दा एक पटक उनी यसरी चर्चामा आइन् कि एकै रातमा देश तथा विदेशले चिन्यो तर त्यो चर्चा लामो समयसम्म रहेन । अचानक हराइन् । अब फेरि उनी एक पटक फिल्मी पर्दामा छाउने तरखरमा छिन् । उनी अर्थात कुशुम श्रेष्ठ । कुशुम तरकारीवालीको नामले भइरल भएकी युवती हुन् । तस्बिर भाइरल भएपछि सबैतिर चिनिएकी उनी ‘लम्फू’ चलचित्र मार्फत पर्दामा छाउन लागेकी हुन् । २८ वैशाखदेखि प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको उनी मुख्य भूमिकामा रहेकी छन् । चलचित्रको अहिले प्रचारप्रसार भइरहदा उनको पनि चर्चा चल्न थालेको छ । ‘लम्फू’मा आफ्नो निक्कै राम्रो भूमिका रहेकाले अभिनयमा स्थापित हुने उनी बताउँछिन् । आकर्षक अनुहार, मनमोहक मुस्कान र हाइट राम्रो भएकी कुशुमसँग एकै भेटमा जो कोही पनि मोहित हुन सक्छ । उनै कुशुमसँग यस्ता छन् दश प्रश्न :